Rohingyas killed in fresh Arakan violence
MD January 18, 2014
Activists in Burma say eight Rohingya Muslims were killed by police in fresh violence in Arakan state.
Details about the incident, which is said to have taken place last week near the town of Maungdaw, vary widely.
Reports say clashes erupted with police following the disappearance ofapoliceman ataRohingya village.
The government of Burma (also known as Myanmar) said it had no information, but local authorities denied any killings took place.
Arakan state officials told the BBC that 84 Rohingya villagers had been arrested after an incident.
But the Arakan Project, an advocacy group that focuses on Rohingyas, said events reached their climax on 13 January in Du Char Yar Tan village with at least eight people killed and more feared dead.
Women and children are reported to be among the dead.
1 thought on “Rohingyas killed in fresh Arakan violence”
Abdullah Myanmar says:
ဒု ချီးရတန်း l မောင်တောမြို့ဧ။် အခြေအနေ တကယ် ဆိုး ရွား နေပါတယ်။ လူ ၁၀၀ ကျော် ဖမ်းပြီး ၁၀ လောက် လွတ် လိုက်တယ်။ ၁၀၀ ကျော် အ သေသတ်လိုက်တယ်။ တစ်ရွာလုးံ ဖျက် စီး လိုက်တယ်။ ပစ္စည်း အားလုးံ လု လိုက်တယ်။ ယခု အဲ ရွာမှာလူတွေလုးံဝမရှိပါဘူး။
ကြောက်ပြီးရိုဟင်ဂျာ တစ်ရွာလုံးထွက် ပြေးကြခဲ့ရ တယ်။ လူတွေမြင်တိုင်းလိုက် သတ်နေတာ ဖြစ်လို့ကိုယ့်အိမ်ကိုထား၍ လွတ်ပြီး ထွက်ပြေးရ တာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ အသေသတ်လိုက်တာ ထဲ မှာတချွု့ ကတော့ ၁။ မူဆနာ(ဘ)ဆော်ယဒ်အမတ်..၄၀နှစ်
၂။ နုရ်ဘေဂါမ်(ဘ)ဟောရ်မုစ်…၅၀နှစ ၃။ ဘေဂါမ်(ဘ)မူဟာမ်မတ်….၄၅နှစ် ၄။
သူ့ မြေးနှစ်ယောက် (မ+ကျား..၈နှစ်) ၅။ ဇာဟိတ်အာလောမ်(ဘ)………..၃၀ နှစ် မြေးနှစ်ယောက် (မ+ကျား..၈နှစ်) .၆။အိဆိဘေဂါမ်(ဘ)ဆော်ယဒ်အမတ်….၁၅နှစ်…သုံးပိုင်းဖြတ် ၇။ကလေး ၃ယောက် (ကျား ၂+မ-၁) (ဘ)နုရ်ဆော်လာမ် ၈။အဘူဘောက်ကာရ်ဆီဒီက်(ဘ)အိုမောရ်ဟာမိတ်….၂၀နှစ် ၉။ အဒူဆော်လာမ်(ဘ)အဒူရှုကုရ်…..၆၀နှစ်…မနေ့က ဖမ်းဆီး….မောင်တော ရဲစခန်း၌ ကြိုးစွပ် ပြီးကွပ်မျက် ၁၀။ ကလေး နှစ်ယောက် (မ+ကျား)